कमरेड ओली ! चोइटिएर जाने कि, रुपान्तरण हुने ? -कमरेड ओली ! चोइटिएर जाने कि, रुपान्तरण हुने ? -
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १४:०४ मा प्रकाशित
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अनिष्टको संकेत छ । हालै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगबाट पार्टी स्थायी कमिटि बैठक स्थगित गरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाए, बोलाउँदा प्रधानमन्त्री बैठकममा आएनन् । नेकपाभित्रको गतिविधि हेर्दा उसको आन्तरिक जीवनमा कालो बादल मडारिएको चित्र हामी देख्न सक्छौँ ।
विशेषगरी, नेकपामा देखिएको एउटा ठूलो खड्ग अरु कसैबाट नभएर स्वयंम मिस्टर ओलीको अहंता र घमण्डी व्यहवारबाट हो भन्ने रायको पक्षमा आज धेरै मान्छेहरु उभिन थालेका छन् । खड्गप्रसाद ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जो देशका प्रधानमन्त्री छन्, त्यो दुईतिहाई बहुमतप्राप्त । सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, जनतालाई विकासे नाराले लठ्ठ बनाउँने सरकारप्रमुख केपी ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक यात्रामा साँढे सातको दशाले पहिलो पटक घेरेको प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ, उक्त दशा निकै नै खतरनाक छ, जसले नेकपालाई भन्दा ओलीलाई नै ध्वस्त बनाउन् सक्छ । यो दशाले मिस्टर ओलीलाई घेर्नुका पछाडि उनले गरेका अनेकन हत्काण्डहरु छन् । उनले र उनका आसेपासेले पर्दा भित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्रको बलियो जाल बिच्छ्याउँन खोज कै होे, जुन पासोमा स्वयंम आफै पर्ने संभावना बढेर गएको छ । तर, अझैपनि उनका आसेपासे तथा बुझ्रुक भनाउँदाहरु अनेकन हतकाण्डहरुको किनारामा साँची बस्दै ओलीले भनेका र गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु आँखा चिम्लिएर ठिक छन् भन्न पछि पर्दैनन् । । यो केवल पद र सत्ताको लागिमात्र लडाइ हो भन्ने मनुवाहरु पनि कमि नभएको होइन । त्यसकारण, मिस्टर ओलीले जेजे भने र जेजे गर्दैछन् उनका ती उदण्डताहरुको फेरेस्ती ती सबै ठिक छन् भनेर उत्तानोशरणम हुँने भक्तलाई गम्भिर प्रश्नहरु स्वभाविक रुपमा यहाँ उठाइएको छ । आउनुहोस एकैछिन चर्चा गरौं ।
वास्तवमा हिजोको सहमती के को लागि थियो ? भिन्न राजनीतिक पृष्ठभुमी र सिद्घाान्तबाट निर्देशित दलबीचको एकताको मूल मर्म के थियो र छ ? हिजोको सहमती आलोपाले सरकारको नेतृत्व गर्नु थियो । किनकी दुई भिन्न राजनीतिक पार्टीको एकताबाट नै बिशाल जनमत प्राप्त भएको होइन र ? तर, पालोपालो सरकारको नेतृत्व नगरौं । एउटा स्थिर सरकार बनाएर जनताको चाहनाहरु पूरा गरौं । यसले नै राम्रो सन्देश दिन्छ । तपाइँ नै पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुहोस् , म हुन्न भनेर अर्का अध्यक्षले भद्र सहमतीबाट पछाडि हटेको घाम जति कै छल्र्लङग छ । के यो त्याग पदको लोलुप्ता हो ? के कुर्सीको लागि मात्र गरेको संघर्ष हो भन्नेहरुले यसलाई कसरी बुझ्छन् ?
राजनीतिक विधेयक किन र केका लागि अनि एमाले पार्टीको दर्ता किन् ? मिस्टर ओलीको सरकारले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी आफुखुशी राजनीतिक विधेयक ल्याएर रातारात राष्ट्रपतिलाई स्वीकृती गर्न लगाए । तर, त्यो सही नियतको थिएन् । किनकी उक्त विधेयक पार्टी, सरकार र जनताको पक्षमा प्रष्ट रुपमा थिएन । यसको नियतमा खोट थियो । जुन कारणले गर्दा पार्टी र सरकारको खुब आलोचना नभएको होइन् । कोरना महामारीबाट जनता आजित भएको अवस्थामा मिस्टर ओलीको ताण्डबले राष्ट्रपती र पूर्व आइजीपी समेत विवादमा धकेलियो । के यी कर्तुतहरु सही थियो ? पछिल्लो घटना एमाले पार्टीको दर्तालाई केलाएर हेर्दा ओलीको कर्तुत प्रष्ट हुदैछ । अध्यक्ष प्रचण्ड यो कुरा भन्न विवस भए कि अर्को अध्यक्षको पहलमा नै एमाले पार्टी दर्ता भएको हो । त्यसकारण, मिस्टर ओली मनोमानी रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
मिस्टर ओलीले आफुलाई अब्बल राष्ट्रवादी र अरुलाई खुङखार राष्ट्रघाती किन भने ? लिम्पियाधुरा र कालापनी जमिनलाई समेटिएर नेपालको नक्शा प्रकाशन गर्न नेकपा पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष भुमिका खेलेकै हो । अन्तमा, पार्टीको सल्लाह अनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्न सफल भएको हो । र, यसको जश सरकारलाई पनि अवश्य नै जान्छ । यहाँसम्म आउँदा पार्टीले सरकारसँग मिलेर नै काम गरेकै थियो । विस्तारवादी भारतको विरुद्घमा सरकारलाई पूर्ण समर्थन नदिएको भने होइन् । तर, मिस्टर ओलीले एकाएक भारतले यहाँको केही नेतृत्वको साथ लिएर आफ्नो सरकार गिराउँन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगायो । मिस्टर ओलीको आरोपलाई ठाडै खण्डन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘तपाइँको राजीनामा भारतले होइन मैले मागेको हो ।’ ओलीको यस भनाईले उनको प्रतिष्ठाको उचाइ मात्र घटाएन नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिक्ता, स्वतन्त्रता र गरिमामा ठूलो चोट पुर्यायो । उनी यति निकम्मा र टपरटुइयाँ छन् भन्ने स्पष्ट भयो । आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी हुँ भनेर देखाउँन आफ्नो पार्टीका सहयोद्धा कमरेडलाई राष्ट्रघातीको बिल्ला भिराउँन समेत उनी किमार्थ पछि परेनन् । के यो मिस्टर ओलीका गैरजिम्मेवार भनाई होनन् ?
बेला न कुबेला जबजको बहस अहिले किन ? अझैपनि पार्टीका धेरै विषयहरु मिल्न बाँकी नै छन् । अनेकन तह र संगठनहरुमा धेरै विषयहरु मिलाउँन बाकी हुँदाहँुदै एकपक्षिय रुपमा जनताको बहुदालीय जनवादमा अहिले नै बहस गर्नु आवश्यक छैन । अर्को कुरा, पार्टीको पूर्णरुपमा एकता भएपछि मात्र पूर्व एमालेको ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ र पूर्व माओवादीको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ लाई महाधिवेशनमा बृहत र घनिभुत रुपमा छलफलमा लाने र अहिले ‘जनताको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यक्रम बनाउँने भन्ने अग्रिम सहमती थियो । आज त्यो संझौता गम्भिर रुपमा उल्लघंन हुँदैछ । पार्टीको सहमती बीना यो विषयमा को खेल्दैछ ? के मिस्टर ओली त्यसको डिजाइनर होइनन् र ?
आफ्नो पक्षमा कार्यकर्तालाई सडकमा किन उफारेको ? व्याक्ति प्रधान कि पार्टी ? मिस्टर ओलीले आफ्नो पक्षमा केही कार्यकर्ता सडकमा उतारेका छन् । जसले प्रचण्ड, माधव र अन्य नेतृत्वलाई गलत हुन् र मिस्टर ओलीमात्र सही छन् भन्ने कुरा देखाउँन खोजेको छ । जुन कुरामा पार्टीको असहमती छ । र, त्यो पार्टीको नियम, बिधी र पद्धतिको खिलाफमा छ । पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले पार्टीको नियम, बिधी र पद्धतिको पालना गर्दै पार्टीलाई एकजुट बनाएर नेतृत्व गर्नुपर्ने बेलामा केही मान्छेहरुलाई जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा सडकमा लगाउँन लगाउँनु भनेको के हो ? के यो पार्टीको नियम अनुसार छ ? पार्टीको निर्णय नमान्ने अराजक व्यक्ति वैधानिक कि पार्टी ?
मिस्टर ओली र उनका आसेपासे विवाद्स्पद र राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा किन खुलेर लागेका छन् ? राष्ट्र र जनताको हित विपरित एमसीसी निश्चित कमिसनखोरीको पक्षमा देखिन्छ । के त्यो साँचो होइन् ? एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छैन् । किनकी एमसीसी अनुदानको भेषमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधिन्ताको खिलाफमा छ । जुन परियोजना अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंश हो भन्न हिच्किचाउँनु पर्दैन ।
त्यसकारण, यसमा अमेरिकाको स्वार्थ लुकेको छ । हाम्रो छिमेकी देशहरुलाई सैन्य रणनीतिबाट चारैतर्फबाट घेर्न उसको हिडन् रणनीति प्रष्ट छ । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र केवल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर मुल्यको मात्र होइन् । इतिहासमा कसैको गुलाम नभएको राष्ट्र नेपाल कसैको स्वार्थ पूरा गर्न केही थान अरब रुपैयाँको लागि आफ्नो स्वतन्त्रता किमार्थ दाउमा राख्न दुसाहास राखदैन् । हिजो महाकाली सन्धिबाट देशले अरबौं कमाउँन सक्छ भन्दै राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि कसले गरेको हो ? मिस्टर ओली, जनता यस मानेमा अनविज्ञ छैनन् । जनता मूर्ख छैनन् ।
के मिस्टर ओलीले पार्टीको निर्णय, विधि, पद्धति मान्नु पर्दैन्? बहुमतको निर्णय र पार्टीका बिधि नमान्ने एउटा अटेरी मान्छे कसरी परिपक्व कम्युनिस्ट बन्न सक्छ ? मिस्टर ओलीले पार्टीका सबै बिधि, पद्धति र नियमलाई ध्वस्त पार्दै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । र, उनी एक तानाशाह हिटलरको पथमा लम्किन्दैछन् । जसले आफूलाई पार्टी भन्दा माथि राख्र्दैछन् । पार्टीको हरेक नियम र बिधिलाई उनले नबुझे र नपत्याए झैं गरी दम्भ पालेर बसेका छन् । तर, म नै शक्तिशाली हँु भन्ने पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको स्थाइ कमिटिको मिटिङ देखि डरले भागेका छन् । एउटा साहासिक र निडर प्रधानमन्त्रीको छवी बनाएको व्यक्ति आज आफ्नै पार्टीको मिटिङमा सहभागी हुँदै छलफल गर्न आँट गर्न समेत सकेनन् । अनि पार्टीको निर्णलाई सिरोधार्य गर्न सकेनन् । त्यसोभए के मिस्टर ओली हुतिहारा अथवा डरछेरुवा भएकै हुन् त ?
यस्ता धेरै अनगिन्ति उत्पट्याङहरु मिस्टर ओलीले गरेका छन् , जुन यहाँ उल्लेख गरेर साध्य छैन । उनले गरेका विवादस्पद र बकमफुस्रे गफले अब मिस्टर केपी ओली विकासका वाहक हुन् भन्ने कुरामा शंका उब्जिन थालेको छ । उनी एउटा कुख्यात प्रपोग्यान्डिस्टको रुपमा मात्र नेपालको राजनीतिमा रहने हुन की भन्ने चिन्ता बढेर जादैछ । किनकी ओलीले कामले होइन ‘बेसार पानी’ले जस्ता उडन्ते गफ गर्दै जनताको दिमाग ओभरह्याङग बनाएको छ । जनता दिग्भ्रमित भएका छन् । भलै उनीसँग राज्य अगाडि हाक्नको लागि सबथोक छ । जनताको पूर्ण अभिमत र पार्टीको अटल साथ सहयोग । तर, उनी एक असफल नेतृत्वको कलंक बन्दैछन् ।
पछिल्लो समयमा पर्टीको साथ मिस्टर ओलीले नपाउँनुको मुख्य कारण उनको उदण्ड व्यवहार नै हुन् । बेलगाम घोडा झैं मिस्टर ओली दौड्दैछन्—सहमतीलाई लत्याउँदै अनि सबैतिर ‘म’, ‘म’ भन्दै । तर, उनी मैले जे गरे त्यो ठिक छ, अरुले जे गर्दैछन् त्यो गलत छ भन्ने मनगढंते सोचबाट सिकिस्त विरामी भएका छन् भन्दा गल्ति हुन्न होला । सबैले मैले भनेको मान्नुपर्छ । मेरो कुरा मात्र सुन्नुपर्छ । नत्र म अलगै पार्टी बनाउँछु । उनको यस्तो धाक र धम्की देखेर जनता आजिद भइसके । त्यसकारण, जनताले वाक्क र दिक्क हुदै भन्नथाले ‘मिस्टर ओली कि त चोइटिएर जानुहोस या त रुपान्तरित हुनुहोस् ।’ तर, चोटिएर जानु भनेको आत्माहत्या गरे झैं हुनु हो । किनकी मिस्टर ओलीका लागि पार्टी फुटाउँछु भन्नु भनेको ‘अण्डाको प्रहारले ढुङगाको पहरा फुटाउँछु भन्नु उस्तै हो ।’ र, साँचो कुरा उनी अण्डाको हालत जस्तै हुन कतिपनि बिलम्ब हुन्न ।
तसर्थ, पार्टी चोइट्याउँने बाटो नहिड्नु नै मिस्टर ओलीलाई सुझाब छ । बरु मिस्टर ओली र उहाँको सल्लाकार टोलीलाई के सुझाब छ भने पार्टीको बैठक राख्नुहोस् । पार्टीको हरेक निर्णलाई मान्नुहोस् र मनाउँनुहो्स् । दुई वटा जिम्मेवारी मध्ये एउटा मात्र जिम्मेवारी वहन गर्दा राम्रो होला—प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष । सहमतीको आधारमा पार्टी एकतालाई मूर्तिकृत गनुहोस् , त्यसको लागि अर्का अध्यक्षसँग गहन रुपमा छलफल गर्दै र पार्टीका अन्य कमरेडहरुको विश्वास जित्ने कार्य गर्नुहोस् । यो नै सही अवसर हो , सरकारको सही नेतृत्व गर्दै विकास र निर्माणले जनताको मन जित्न संभव छ । सायद यो नै मिस्टर ओलीको जिवनकालको नै स्वर्णिम यूग हुन सक्छ । किनकी असल शासन र विकासको पर्यावाची बन्न सफल सिंगापुर देशको प्रधानमन्त्री ‘ली कुआन यु’ झै राष्ट्रमा विकासको आँधिबेरी ल्याएर देशलाई संवृद्ध बनाउन भुमिका खेल्नु भएमा मिस्टर ओली एउटा राजनेताको रुपमा सधै जनताको हृदयको सिंहासनमा बस्न सफल हुनुहुनेछ । भनिन्छ बुद्धिमानी मान्छेले अवसरको ठिक तरिकाले सदुपयोग गर्छ । तसर्थ, पहिले आफु रुपान्तरित हुनुहोस् । आफुलाई बदल्नुहोस् , अनि अरुलाई बदलिन् प्रेरित गर्नुहोस् । यस दुनियामा असंभव भन्ने कुरा छैन् । तसर्थ, अब तपाइँ चोइटिएर जाने कि पार्टीलाई मजबुद बनाउँने कडा ‘रसायन’ बन्ने । दुईमा एक रोज्नुहोस् । संभवतह दोस्रो अपसन तपाइँ र राष्ट्रको लागि नै हितमा हुनसक्छ । मिस्टर ओली, बल तपाइँकै खुट्टामा छ ।